Gabar Muslim ah oo lagu dilay meel u dhaw masaajid ku yaalla Mareykanka - BBC News Somali
19 Juunyo 2017
Lahaanshaha sawirka Facebook - Isra Chaker
Image caption Sawirka Nabra Xuseen
Booliiska gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa helay meyd loo maleynayo iuu yahay kan gabadh 17 jir ah oo Muslim ah oo la tuhunsan yahay in laga qafaashay meel u dhaw masjid.
Nabra Xuseen ayaa la soctay asxaabteeda markii uu muran dhexmaray iyaga iyo darwal marayay waddada Herndon, sida uu sheegay booliska.
Wargayska Washinton Post ayaa ku soo warramay in koox dhallinyaro ah oo ka koobnaa 4-5 qof oo Nabra Xuseen ay ka mid ahayd ay tageen maqaaxi cunnada fudud lagu iibiyo si ay cunno uga soo iibsadaan, ka dib markii ay ka yimaadeen salaadda taraawiixda.
Abaarihii 4tii ayaa kooxda waxay iska hor yimaadeen darawalka ayagoo waddada maraya. Masaajid ayey ku carareen, hase yeeshee mid ka mid ah oo ahayd Nabra ayaa halkaa lagaga tegey, markii dambana waxaa la diiwaangeliyey in la waayey.
Qof laga shakisan yahay oo 22 jir ayaa la xiray, waxaana lagu eedeeyey dilka gabadha.
Lahaanshaha sawirka Fairfax Police
Image caption Boolisku wuxuu sheegay in dhacdada ay waddadan ka dhacday
Sababta weerarka ayaan weli la ogayn, laakin mid ka mid ah arrimaha la baarayo ayaa ah in fal nacayb ku salaysan uu noqon karo.
Intii baadigoobku socday, boolisku waxay sheegeen inay joojiyeen gaari si shaki leh halkaa u marayey dararwalkiina ay dhaadhiciyeen.
Goor dambe ayey meydkii gabadha ka heleen meel biyo galeen ah oo qiyaastii ilaa 3 mayl u jirta halkii mashaqadu ka dhacday sida ay boolisku ku sheegeen hadal ay soo saareen. Waxaa kale o halkaa laga helay usha budhka ah ee lagu cayaaro cayaarta baseballka.
Baaritaan xagga jirka ah ayaa la samayn doonaa si loo xaqiijiyo meydka inuu yahay kii gabadha iyo sababta saxda ka dambeysay dhimashada.